INepal, izwe lezintaba ezinkulu namathafa aphuphayo | Ukuhamba kwe-Absolut
INepal izwe elincane elisemngceleni ophakathi kweziqhwaga ezimbili: China futhi i India. Ngensimu enezintaba efaka ezinye iziqongo ze- Himalaya, Kuyindawo ephelele uma uthanda ukuhamba ngezinyawo noma ukukhuphuka ukwazisa izindawo ezinhle ezibonwa kusuka ku- Annapurna noma ungumnikazi Everest.
Kepha, uma ungenawo umoya wokuzidela, iNepal inezinye izinto eziningi ongakunika zona. Ungavakashela amadolobha afana Patan, UKathmandu o I-Bhaktapur, nezindawo zalo zangeNkathi Ephakathi, izigodlo ezihloniphekile namathempeli afihlekile. Ungazi futhi amapaki wemvelo. Futhi, noma kunjalo, iNepal iyindawo efanelekile ongafika kuyo Nirvana. Uma ufuna ukuyazi, sikumema ukuthi usilandele.
1 Yini ongayibona futhi uyenze eNepal
1.1 I-Everest ne-Annapurna
1.2 Amapaki wemvelo aseNepal
1.3 IKathmandu, inhlokodolobha yezwe
1.4 Isigodi saseKathmandu, enye indlela ebalulekile eNepal
1.5 IPokhara, elinye idolobha lezivakashi laseNepal
2 Ukudla eNepal
3 Ungafika kanjani ezweni lase-Asia
4 Amathiphu wokuhambela eNepal
Yini ongayibona futhi uyenze eNepal
Singaluqala uhambo lwethu lokuya eNepal ngokuvivinya umzimba kancane bese sazi amadolobha alo amakhulu nezindawo zalo ezingcwele, ngaphandle kokukhohlwa ezinye izindawo zemvelo ubuhle bazo obungaphazamisi okwezintaba.
Akudingeki ukuthi ube ngumqali ophumelelayo ukuze usondele ezikhangisweni ezimbili eziyinhloko zaseNepal: the Everest futhi i Annapurna. Ungakhuphukela kufayela le- ikamu lesisekelo owokuqala, ongaphezu kwamamitha ayizinkulungwane ezinhlanu wokuphakama. Njengoba ungabona, akuyona indawo elula elula njengoba ihlala cishe izinsuku eziyishumi nane futhi ukugula kokuphakama kwenza kube nzima kakhulu. Kepha kuyabiza kubavakashi abaningi. Uzodinga i- imvume ekhethekile, kepha isipiliyoni sikufanele.
Ungaphinde uhambe izintaba e-Annapurna. Ngokubambisana, bakha umzila wamakhilomitha angamakhulu amabili namashumi amahlanu ongawenza ngezigaba nangokuhlukana. Kepha, noma kunjalo, uzojabulela nge izindawo ezihlukile zezintaba emhlabeni.
Ngakolunye uhlangothi, gcina engqondweni i- isimo sezulu. Izinyanga ezinhle kakhulu ukufinyelela kulezi zintaba ngo-Okthoba, Novemba noDisemba ngakolunye uhlangothi nangoMashi, u-Ephreli noMeyi ngakolunye uhlangothi. UJanuwari noFebhuwari akunconywa ngenxa yamazinga okushisa aphansi neqhwa. Ngokuqondene noJuni, Julayi, Agasti noSepthemba, kuyisikhathi semvula esenza imizila ibe nzima. Kodwa-ke, kuyiqiniso futhi ukuthi, ezinyangeni ezifanele kakhulu ukuvakashela izintaba, kunenani elikhulu lezivakashi ezifuna ukwenza imizila yazo.
IRoyal Chitwan National Park
Amapaki wemvelo aseNepal
Izwe lase-Asia linamapaki emvelo amaningana. Ungavakashela leyo kaBardia, eliseningizimu-ntshonalanga futhi laziwa ngamahlosi alo aseBengal nezingwenya zalo ezinkulu. NOMA lowo oseLangtang, lapho kunezingwe zeqhwa namabhere. Kepha, ngaphezu kwakho konke, kufanele wazi amapaki amabili ahlelwe njenge Amagugu Emhlaba.
Esokuqala ukuthi owakwaSagarmatha, esesifundeni sase UKumbu ukumboza ingxenye enhle ye-Everest massif. Ungaqala ukuvakasha kwakho kwe- isivakashi isikhungo, esemzini wase UNamche Bazaar. Ngokuqondene nezinhlobo ezi-autochthonous, yindawo yenyamazane yaseTibetan.
Owesibili, ngokwengxenye yawo, yi- IRoyal Chitwan National Park, eseningizimu yezwe futhi lokho kwakuyindawo yokugcina amakhosi. Igama lakho lisho ukuthi "Inhliziyo yehlathi", ezokunikeza umbono wohlaza ozoluthola. Ngokuqondene nezilwane zayo, inezinhlobo eziningana ezisengozini yokuqothulwa njengobhejane baseNdiya noma iGanges gharial, i-sauropsid enkulu enomphunga wayo omncane oyivumela ukuthi idle izinhlanzi.
IKathmandu, inhlokodolobha yezwe
Ukuvakashela iKathmandu kungena edolobheni elinabantu abayizigidi elinemigwaqo engagandayiwe, ukungcola okukhulu nomsindo ovala izindlebe. Kepha futhi ithola izikhumbuzo ezinhle, ezinye zazo ezilinyazwe ukuzamazama komhlaba kuka-2015.
Into yokuqala okufanele uyivakashele eKathmandu yile Isikwele saseDurbar, i-nucleus eyasebenza njengendawo yokuhlala yomndeni wasebukhosini. Empeleni, indawo yasemanzini kusho ukuthi "isigodlo." Wakhiwe ngesikwele kanye nemigwaqo yawo eseduze, nezakhiwo zawo zesigodlo namathempeli. Kepha into efisa ukwazi kakhulu yi- indlu yamaKumari. Leli yigama elinikezwa intombazanyana ekhethwe ukumela unkulunkulu wegama elifanayo. Ungumuntu wesiko laseNewar futhi ukuze abe yiKumari, intombazanyana kumele iphumelele izivivinyo eziningi. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi indima yakhe isekhona, akakwazi ukushiya indlu yakhe yethempeli.
Kufanele futhi ubone eKathmandu the I-Boudhanath stupa, enye yezinkulu kunazo zonke emhlabeni futhi ethweswe umqhele ngamehlo kaBuddha. Njalo ntambama, izindela ezivela ezweni lonke ziyahlangana zithandaze. Ngaphezu kwalokho, eduze kwakho unamakhefi nezitolo eziningi zobuciko baseTibetan.
Futhi, kufanele usondele kufayela le- Ithempeli laseSwayambhunath Buddhist, igcwele izinkawu ezinesici, okuyiNdawo yamaGugu Omhlaba etholakala egqumeni lapho uzobona khona idolobha lonke. Ekugcineni, vakashela i- Amathempeli kaKopan noPhullari futhi uphumule ku Insimu Yamaphupho, ipaki enhle yokwakhiwa kwe-neoclassical maphakathi neKathmandu.
Isigodi saseKathmandu, enye indlela ebalulekile eNepal
Awungeke ushiye inhlokodolobha ngaphandle kokwazi lokho okubizwa ngokuthi yiKathmandu Valley, okubandakanya lokho nakwamanye amadolobha amabili: iPatan neBhaktapur, kanye nengqikithi izikhumbuzo eziyikhulu namashumi amathathu kubaluleke kangako ukuthi indawo ibekwe njenge Indawo Yamagugu Omhlaba Isengozini.
Patan Iphinde ibe neyayo Isikwele saseDurbar, okuyigceke futhi lesigodlo samakhosi asendulo. Futhi inamathempeli amaningana anjenge Krishna's, eyenziwe ngamatshe ayizinhlangothi ezine; iDegutale o iVishwanath, nezindlovu zalo zamatshe. Zonke zakhiwe ngekhulu leshumi nesikhombisa futhi zihlukaniswe ngamapharawo aqanjwe ngamagama okhuni.
Mayelana I-Bhaktapur, ebhekwa njengokugxilwa okuyisisekelo kwezwe, futhi inesikhungo sayo semizwa i- Isikwele se-Durbar. Kumvelo yayo, unokwakhiwa okufana ne- Isigodlo samafasitela angamashumi ayisihlanu nanhlanu, lo Umnyango Wegolide namathempeli afana uBatsala, nensimbi yayo enkulu, noma iPashupatinath, ngemidwebo yayo ehlukile evusa inkanuko yobulili.
Akubona bodwa edolobheni. Ithempeli Changu narayan, ngamakhilomitha amahlanu ukusuka kuyo, iyona endala kunazo zonke ezweni lonke, kuyilapho i- Nyatapola, esigcawini saseTaumadhi futhi ezinamazinga aphezulu ayisihlanu amele izakhi, iphakeme kakhulu eNepal.
IPokhara, elinye idolobha lezivakashi laseNepal
Leli dolobha linomlingiswa ohluke kakhulu kunalowo owedlule, owesibili ukuheha kakhulu ezweni. Ngoba ukuyivakashela eduze kwendawo ezungezile akusho ukubona izikhumbuzo ezinkulu (yize zikhona nazo), kodwa Ukubukwa okumangalisayo.
Kumakhilomitha angamashumi amathathu nje kuphela, izintaba zikhuphuka cishe amamitha ayizinkulungwane eziyisikhombisa akha izigodi ezinhle. Gqama phakathi kwabo lowo osemfuleni iGandaki, okujule kakhulu eMhlabeni. Futhi endaweni yasePoghaka ipewha lake, enezimpophoma ezimbili ezihlaba umxhwele lapho amanzi awo, ngemuva kokuwela kuwo, enyamalala khona.
IGandaki River Gorge
Nje esiqhingini echibini unayo Ithempeli laseBarahi, ngenkathi usengxenyeni endala yedolobha unayo leyo IBindhyabasini y Bhimsen. Ngaphezu kwalokho, iPokhara ingenye yamaphoyinti amakhulu okuqala ohambo oluya e-Himalaya.
Kuyidolobha lesibili laseNepal ngenani labahlali futhi lingesinye sezikhungo zalo eziphambili zokukhiqiza izimboni. Kungakho sikusho kuwe. Kodwa-ke, ingenye yezimbalwa ukuvakashelwa okusebenzisekayo ohambweni lwakho oluya eNepal ngoba alunazo izikhumbuzo ezikhethekile ngokukhethekile.
I-gastronomy yezwe lase-Asia ingumphumela wamathonya amaningi. Okubaluleke kakhulu yilabo abangomakhelwane bayo abangamaNdiya, amaShayina nabaseTibet. Kepha futhi inezakhi zokudla kwaseThai. Kunoma ikuphi, awusoze wazithola izitsha ngenkomo, ngoba iyi- isilwane esingcwele ngengxenye enhle yabantu bayo.
Kunalokho, unenyathi nembuzi. Kepha iresiphi yezwe iyonke dal bhat tarkari, indishi yama-combo enesobho likadali, irayisi, nemifino ephekiwe. Inikwa kuthileyi enezinto zalo ngokuhlukile futhi ihambisana namakhukhamba, ulamula, ulamula noma upelepele oluhlaza.
Esinye isidlo sendabuko sithi momo, equkethe uhlobo lwama-meatballs ngendlela yeTibetan nezinongo. Zilungiselelwe, ngokunembile, nenyama, imbuzi noma inyama yenkukhu, kepha futhi nemifino kuphela. Ngokwakhe, chow mina noma ugovuze ama-noodle othosiwe avela ekudleni kwaseChina.
Ezinye izitsha ezijwayelekile yilezi kachila noma inyama egayiwe enezinongo, i- syeni noma isibindi esithosiwe, i- phuma noma inyama ethosiwe, i- ukuthi noma isobho likabhontshisi kanye ne- wo noma ikhekhe lentilili. Ngokuqondene nama-dessert, kuvame kakhulu ku- dawu noma iyogathi kanye yehlisa, uhlobo lwejamu omuncu.
Ipuleti lama-momos elinososo
Ekugcineni, maqondana neziphuzo, itiye izwe lonke. Ezindaweni ezinezintaba, ukufudumala, bakuthatha kunamandla kakhulu futhi kunebhotela. Kepha ungazama futhi amabele noma irayisi ubhiya; the ujusi lukamoba ushukela; i mahi, okuyi-buttermilk noma i- i-rakshi, i-millet distillate.
Ungafika kanjani ezweni lase-Asia
Izwe lase-Asia linesikhumulo sezindiza samazwe omhlaba, iTribhuvan yaseKathmandu, okufika kuzo izindiza zivela emhlabeni wonke. Uma usufikile, unohambo oluya kwamanye amadolobha. Kodwa-ke, asibancomi njengoba ezinye izikhumulo zezindiza eNepal zincane futhi ezinye ziyingozi ngenxa yemvelo yazo enezintaba. Ngaphezu kwalokho, izindiza ezenza imizila nazo zisezingeni eliphansi.
Abahambi abaningi bakhetha ukuya eNepal besuka eNew Delhi. Bayakwenza ku i-tren edolobheni elisemngceleni we URaxaul, okusengokwakho India, bese uthatha ibhasi eliya eKathmandu.
Kunoma yikuphi, ezokuxhumana akuyona isudi eqinile yaseNepal. Imigwaqo isesimeni esibi kakhulu futhi amabhasi axhumanisa amadolobha ahlukene awakhululeki njengoba eshibhile. Kukhona ezinye izimoto ezivela ezinkampanini ezizimele ezibiza kakhulu, kepha futhi zikhululekile.
Kunoma ikuphi, akunconywa ukuthi uhambe kuzo ebusuku. Abashayeli bavame ukusizakala ngemigwaqo engenalutho ukugijima futhi izingozi zivamile. Ngokufanayo, ukweba imithwalo kuvame ukwenzeka, ngakho-ke sikucebisa ukuthi uyikhiye ngengidi.
Ngakolunye uhlangothi, Imithetho yaseNepal ikuvimbela ekushayeleni imoto eqashisayo. Esikhundleni salokho, kuzoba lula kuwe ukuthi uqashe eyodwa nomshayeli futhi akubizi kakhulu. Ekugcineni, ukuhamba emadolobheni amakhulu, unokuthandwa i-rickshaw kokubili ama-pedals nogesi (okubizwa kanjalo izikhathi, amakhulu), kanye namabhasi amancane. Njengokulangazelela, sizokutshela ukuthi, ukuze wehle kubo, kufanele ushaye ophahleni ngohlamvu lwemali.
IDurbar Square yePatan
Amathiphu wokuhambela eNepal
Ukuze ungene ezweni lase-Asia kumele ube ne- ipasipoti isebenza okungenani izinyanga eziyisithupha. Futhi, udinga i- i-visa ekhethekile yini ongayicubungula online ku web ovela eMnyangweni Wezokufika noma e-Consulate yaseBarcelona. Uma uzovakashela amaHimalaya noma ezinye izintaba nawe udinga i- ISIKHATHI, imvume ekhethekile ongayicubungula lapho ufika.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele ugqoke imigomo ehlukahlukene. Okuvame kakhulu yi-typhus, i-yellow fever, ikholera, i-MMR, i-hepatitis, ne-tetanus. Umalaleveva nawo uvame kakhulu. Noma kunjalo, i-GP yakho izokwazisa ngalokhu. Kunoma ikuphi, isincomo sethu ukuthi uqashe i- umshuwalense omuhle wokuhamba ukuze unakekelwe kahle uma kwenzeka ingozi noma ukugula.
Ngokuqondene nemali yezwe, kunjalo i-nepalese rupee. Sikukwazisa, ngaphambi kokuhamba, ukuthi ushintshe ama-euro abe ama-dollar futhi, kanye esikhumulweni sezindiza saseKathmandu, wenze okufanayo nalokhu nemali yendawo. Kukhona nezindlu zokushintshana emadolobheni, kepha bakhokhisa ikhomishini eyengeziwe.
Ekugcineni, sincoma ukuthi ubhalisele i- Ukubhaliswa Kwabahambi kusuka eMnyangweni Wezangaphandle waseSpain ukutholakala kalula uma kunezinkinga. Futhi lokho, kanye eNepal, uphuza nje amanzi asemabhodleleni futhi lokho unganambitha isithelo esingageziwe noma amasaladi ukugwema ucingo "Uhudo lomhambi".
Ekuphetheni, iNepal izwe elihle elikunikeza lona izintaba eziphakeme kakhulu emhlabeni. Futhi nezikhumbuzo eziningi kanye ne-gastronomy ehluke kakhulu kunasentshonalanga. Uma ufuna ukuphila isipiliyoni esihlukile, sikukhuthaza ukuba uye ezweni lase-Asia.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Nepal